थाहा खबर: नेपालमै पाइन्छ मासिक ५ लाखसम्म पारिश्रमिक, यी हुन् राम्रो तलब दिने १० कम्पनी
काठमाडौं : तपाईँसँग शिक्षा, सीप र क्षमता छ भने बढी तलबको खोजीमा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्दैन। नेपालमा पनि क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको दाम दिने कम्पनीहरु छन्।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको जागिरमा धेरैको रहर हुन्छ। नेपाली लगानीकर्ताको २० र विदेशी लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत लगानी रहेको यो कम्पनीमा न्यूनतमा २० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ तलब भत्तादेखि अन्य आकर्षक सेवा सुविधा रहेका छन्। सरकारले तोकेभन्दा २०/२५ प्रतिशत पारिश्रमिक मात्रै बढी भएता पनि विभिन्न प्रकारका भत्ता र बोनसका कारण एनसेलमा तल्लो तहका कर्मचारीले पनि नेपाल सरकारको अधिकृतस्तर सरह पारिश्रमिक पाउँछन्।
कर्मचारीको उचित मूल्यांकनसहित काम अनुसारको दाम दिने संस्थामध्ये रुस्लान भोड्का पनि अग्र स्थानमा आउँछ। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा स्वामित्व वृद्धि गरेको ज्वालाखेल ग्रुप अन्तर्गतको रुस्लान भोड्कामा कार्यरत कर्मचारीले पनि न्यूनतम २२ हजारदेखि अधिकतम ३/४ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने गर्छन्।
लोमस फर्मास्युटिकल्सका कर्मचारीको पनि सेवासुविधा आकर्षक छ। 'चाहे जति काम, काम अनुसारको दाम' यो कम्पनीको सिद्धान्त छ। लोमसका कर्मचारीले दिनको ४ घण्टा ओभरटाइम पाउँछन्। तलबको डेढी ओभरटाइम दिने गरेको छ। यो कम्पनीले कर्मचारीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र कर्मचारीको परिवारलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँछ। हरेक महिना एकपटक कार्यालयमै डाक्टर बोलाएर कर्मचारीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ।
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स् पनि राम्रो सेवासुविधा उपलब्ध गराउने कम्पनी हो। पारिश्रमिकभन्दा पनि दीर्घकालीन सेवासुविधा बढी दिइएको यो कम्पनीमा तालिम तथा विकास (ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट) मा धेरै पैसा खर्च गरिएको छ। हरेक वर्ष कर्मचारीलाई सीप विकासका लागि विदेशमा तालिम लिन पठाउनु र पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु देउराली जनताको राम्रो पक्ष भएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
वार्षिक तलबबाहेक ५ देखि ७ महिनासम्मको बोनस उपलब्ध गराउने देउराली जनतामा २० हजार देखि २ लाखसम्म पारिश्र मिक लिने कर्मचारी छन्। देउराली जनता फर्मास्युटिकल्समा काम गर्ने कर्मचारीको पनि निःशुल्क औषधि उपचारको व्यस्था गरिएको छ।
तालिम तथा विकास (ट्रेनिङ एन्ड डेभलप्मेन्ट) भत्ता उपलब्ध गराउने डाबर नेपालमा यातायात, सञ्चार र मनोरञ्जन भत्ता पनि उपलब्ध गराइने गरेको मानव संसाधनका अधिकारीको भनाई छ। यहाँका कर्मचारीको पनि मासिक तलब न्यूनतम २० हजारदेखि अधिकतम ३ लाख छ।
सौरभ ग्रुप* अन्तर्गतको जगदम्बा सिमेन्ट पनि राम्रो सेवा सुविधा दिने कम्पनी मध्ये पर्दछ। जगदम्बा सिमेन्टले मजदुर स्तरमा २० हजारदेखि ३० हजारसम्म र अधिकृत स्तरमा ३० हजारदेखि ५० हजारसम्म पारिश्रमिक दिन्छ।
माथिका बाहेक बैंकिङ क्षेत्रमा नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक पनि कर्मचारीलाई राम्रो सेवासुविधा दिने कम्पनी हुन्। नर्भिक अस्पताल, बी एन्ड बी अस्पताल राम्रो सेवासुविधा दिने कम्पनी हुन्। मेरो रेमिट, निम्बस लगायत कम्पनीमा पनि कर्मचारीको सेवासुविधा आकर्षक छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीमात्र होइन, पछिल्लो समय राष्ट्रियस्तरका कम्पनीले पनि जनशक्तिको महत्व बुझ्न थालेको र जनशक्तिलाई सन्तुष्ट पार्ने उपाय अपनाउन थालेको मानव संसाधनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ग्रोथ सेलर्सका प्रबन्ध निर्देशक मोहन ओझाको अनुभव छ। 'मेसिन चलाउने हो तर काम गर्ने मान्छेले नै हो', ओझा भन्छन्, 'यो विषय अहिले कर्पोरेट हाउसहरुले बुझ्न थालेको हाम्रो अध्यनले देखाउँछ।'
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दा मात्रै मुनाफा वृद्धिमा सहयोग पुग्ने स्वीकार्छन्। 'कार्यरत कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काममा लगाउन सक्नु र उनीहरुको समस्याको समधान गर्न सक्नु नै असल व्यवस्थापकको गुण हो', शर्माले भने।
लोमश फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक युवा उद्यमी प्रवलजंग पाण्डे कर्मचारीको सेवासुविधासँग जिम्वारी निर्वाह जोडिएर आउने बताउँछन्। 'सबै किसिमका सेवा सुविधा दिँदा काम हेर्न नपर्ने, कम्पनीप्रतिको माया देखिने, मैले काम बिगारेँ भने कम्पनीलाई घाटा लाग्छ भन्ने भाव राखेर काम गर्ने गरेको मैले पाएको छु', पाण्डे भन्छन्।
*सौरभ ग्रुप हुनुपर्नेमा यसअघि शंकर ग्रुप भएकाले सच्याइएको छ। - सम्पादक
सरकारी तर्फका राष्ट्र बैंक, संचय कोष, परराष्ट्र, राजस्वका डांकाहरुले पनि यो भन्दा झन बढ़ी बुझ्छन भन्ने हल्ला छ नि मार्केटमा? खोजमूलक समाचार दिनु भए हुन्थ्यो भट्टराई सर ।
Derai Ramro Samachar6 Hajur ko Coca-Cola ko Carmchari ko Subidda ke Rahe6 Janko lagi Manthiyo............Thanks.
Totally fake 🤔🤔🤔🤔 norvic hospital pay low for staff ... So I do not be live on this news
लौन हजुर यो समाचार सुन्दा स्वदेशमै जागिर खाने मनभयो सकेसम्म जागिर मिलाइदिने कोसिस गर्दिनुपर्यो बरु सुटुक्क खल्तीमा हाल्दिम्ला